Ranomainty, nahazatra ny loko fibre na fitaovana hafa, dia mizara roa ny loko - loko voajanahary sy fandokoana synthetic, anisan'izany ny loko mihetsiketsika, vatomam-boninkazo, loko mainty, loko diosa phthalocyanine, loko hodi-pehidradradradra, loko fanentanana, manaparitaka ny loko loko, ny loko asidra sns.
Ny pigment dia akora vita amin'ny vovon-javamaniry misy loko marevaka ary ny habakabaka, izay tsy azo foanana fa miato amin'ny rano, menaka, masinina, solika voajanahary ary sns. Ny pigment dia natambatra amin'ny pigment an-organika sy ny pigment organika. Ny pigments tsy organika dia mizara ho oxide, chromate, sulfate, silicate, borate, molybdate, phosphate, vanadate, sianate vy, hydroxide, sulfide,
Metaly, sns. Ary ny pigment organika dia mizara ho pigments azo antoka, pigment phthalocyanine, pigment anthraquinone, pigment indigo, pigmie Quinacridone, pigmety Polycyclic toy ny oxazine-ⅱ, Fang metane pigmen sns araka ny fanamboarana simika nataony.;
Ny indostria dia manome ny serivisy sy serivisy tetik'asa turnkey ho an'ny orinasam-pamokarana loko sy ny pigment;
Manolotra ny famoahana ny zava-maniry manontolo, serivisy famolavolana injeniera, fanamboarana ny orinasa, serivisy fanitarana, serivisy fanaraha-maso ny tetik'asa, serivisy famolavolana hamahana tanteraka ny fahasarotana eo amin'ny loko sy ny famokarana pigment.
Fitaovana lehibe sy fampidirana asa
Ny mifangaro: ampiasaina amin'ny fifangaroana sy ny vovony, vovony mifangaro amin'ny rano kely. Ho an'ny fiampangana ny tsiranoka, ny indostria dia nanamboatra fomba famafazana azo refesina manokana hanatsarana ny fahombiazan'ny fifangaroana sy ny fitoviana; Ny mixer dia manana fepetra voafetra feno izay misy ny laboratoara sy ny fitaovana famokarana. Karazan-endrika isan-karazany, ao anatin'izany ny vokatra hibrida marobe toy ny miendrika mitsangana ary miolikolika. Azonao atao ny misafidy milina mety indrindra arakaraka ny fizotran'ny famokarana sy ny fananana fitaovana.
Mpanolotsaina: ao anatin'izany ny fifandraisana pneumatic (tsindry tsara, tsindry ratsy, dingana matevina sy dingana faran'izay miolikodina) sy fifanarahana mekanika (kapoka, boaty, rojo ary fehikibo)
Milina fanodinana: ao anatin'izany ny sieve fihodinan'ny fihodinam-baravarankely, sieve an'habakabaka, sivana isan-karazany azo alaina.
Masinina fonosana: ahitana kitapo valve sy milina fonosana kitapo malalaka. Miorina amin'ny sakana famenoana, mizara hatramin'ny 5kg, hatramin'ny 50 kg sy fonosana ton-kitapo.
Mpanaparitaka: Ho an'ny fampielezana mialoha ny saka. Karazan-javatra sy fanondroana isan-karazany dia misy safidy tafiditra ao anatin'izany ny fanaparitahana miaraka amin'ny mpaka taratasy, Fampivoriana karazana vaky, Mpanapaka rozotra miaraka amin'ny agitator Butterfly, karazana karazana Platform sns .. mba hahafahantsika manaparitaka sy mitaky fangaro mifangaro.
Emulsifier avo lenta: ampiasaina amin'ny fampielezana ny pigment, homogenizing, emulsifying sy refin, dia mizara ho karazana batch ary karazana inline; ny emulsifier karazana batch dia azo namboarina amin'ny kettle napetraka karazana fandrindrana miaraka amin'ny agitator isan-karazany mba hahatrarana milina iray miaraka amin'ny asa maro; ny emulsifier dia mety ho namboarina karazana banga ihany koa, azo alaina amin'ny hafanana sy ny karazany maro hafa arakaraka ireo fepetra takian'ny famokarana samihafa.
Kitapo ao anaty harona: karazana fitaovana fikosoham-bary mandavantaona, mampiditra ny fanaparitahana sy fikosoham-bokatra roa ho an'ny milina iray. Mampihena ny fizotran'ny famokarana izany ary tsy misy paompy na valve koa, ka manatsara ny fahombiazan'ny famokarana ary mampihena ny fako ara-nofo. Ho fanampin'izany, mora ny manadio, izay mahatonga azy ho tena ilaina amin'ny famokarana vokatra isan-karazany amin'ny vokatra kely.
Mill Beads Mill: milina fitotoana ampiasaina amin'ny fikosoham-bary mifangaro amin'ny fepetra takiana farany farany. Izany dia miaraka amin'ny vokatra fikosoham-bary tsara sy fahombiazana ambony. Io no milina fanamboarana be mpampiasa indrindra ao an-tsena, ao anatin'izany ny karazana Disc Horizontal Beads Mill ary ny Mill-Horizations Beiziste rehetra manodidina.
Ny tsipika iray manontolo dia mety ho fitambaran'ny milina tokana na tsipika famokarana otomatis miaraka amin'ny haitao famokarana arakaraka ny rafi-pamokarana ara-pitaovana, ny fandrefesana ny rafitra, ny fandrefesana, ny famafazana sy ny fikosoham-bary, ny fifangaroana sy ny rafi-pandrefesana, ny fanadiovana ny rafitra, ny fanaraha-maso otomatis, ny famenon-tena otomatis sns miorina amin'ny sokajy pigment sy ny fepetra takian'ny famokarana.